The Xiaomi Mi A1 na-anata August kwachie patch | Gam akporosis
Xiaomi Mi A1 na-anata akara nchekwa nke August
Ejiri Xiaomi dịka otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-enye nkwado ngwanrọ kachasị na ọdụ ochie ya - yana karịa ndị ọhụrụ - site na mmelite site na OTA. Nke a gosipụtara site na ngwungwu ngwa ngwa ọhụụ a na-ahapụ maka My A1, nke dị n'etiti site na etiti 2017 nke ga-adị afọ abụọ na ahịa.
Ngwaọrụ a bụ gam akporo, yabụ na ọ naghị ewepụta nhazi ọ bụla site na Xiaomi na oyi akwa MIUI ya nwere obi ụtọ, ọ nweela sistemụ arụmọrụ gam akporo ọtụtụ ọnwa. A na-emegharị OS a na mkpanaka yana ihe nchebe kachasị ọhụrụIhe nchekwa nche ọhụụ maka ọ na-agbasa n'ikuku.
Nwelite ngwanrọ ọhụrụ nke na-agbakwunye ihe nchebe nke August na Xiaomi Mi A3 na-abịa n'okpuru nọmba ụlọ V10.0.12.0.PDHMIXM. Naanị naanị ya na-atụle 67.13 MB, ya mere na nke a bụ ihe pụtara ìhè femụwe na-ekwesịghị iwe oge ibudata. Agbanyeghị, ọ na-abịajikwa ọtụtụ ndozi ahụhụ ole na ole na njikarịcha usoro siri ike na ngalaba ndị ọzọ, yabụ uru ọ na-eweta abụghị naanị na ngalaba nchekwa.
Xiaomi Mi A2019 August 1 melite ngwanrọ
Cheta nke ahụ Mmelite OTA na-ewekarị oge iji kesaa site n'ụdị niile enyerela haBiko biko nwee ndidi ka ị na-eche maka nbudata na ọkwa gị na Xiaomi Mi A1.
Xiaomi Mi A3: A na-emegharị etiti etiti
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere, ịnwere ike ịnwa ịmanye mmelite ahụ site na menu Nhazi, ma gbaa mbọ hụ na ijikọrọ na netwọọdụ Wi-Fi kwụsiri ike na ọkwa batrị dịkarịa ala 50% zuru ezu, iji zere oriri data achọghị na ọdịda ọ bụla na usoro nbudata na ntinye nke nwere ike ibili.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi A1 na-anata akara nchekwa nke August
Xiaomi Mi MIX 4 ga-eji ihe mmetụta 108 MP nke Samsung